UJohn Buford Imfazwe Yemibutho Yomphakathi Jikelele
Imbali kunye neNkcubeko IMfazwe yaseMelika
Imfazwe yaseMerika: iMandla Jikelele uJohn Buford
John Buford - Ubomi bokuqala:
UJohn Buford wazalelwa ngo-Matshi 4, 1826, kufuphi neVersailles, KY kwaye wayeyindodana yokuqala kaYohane no-Anne Bannister Buford. Ngomnyaka we-1835, unina wafa ngekholera kwaye intsapho yafudukela e-Rock Island, IL. Ehla ukusuka kumgama omude wamadoda empi, intsha yaseBuford yazibonakalisa ibe ngumkhwele onobuchule kunye nabanikazi abanamakhono. Xa wayeneminyaka elishumi elinesihlanu, waya eKincinnati ukuba asebenze kunye nomntakwabo omdala kwisikhululo se-Army Corps iinjongo kwiLicking River.
Ngethuba apho, waya kwiKholeji yaseCincinnati ngaphambi kokuvakalisa umnqweno wokuya eWest Point. Emva komnyaka kwiKholeji yaseKnox, wamkelwa kwi-academy ngo-1844.
John Buford - Ukuba ngumkhosi:
Ukufika eWest Point, iBuford yazibonakalisa eyona mfundi oqeqeshekileyo. Ukuxhaswa ngethuba lokufunda, waphumelela kwi-16 ye-38 kwiCandelo le-1848. Ukucela inkonzo kwiihhashi, iBuford yayithunywe kwiiNkcazo zokuQala njenge-brevet ye-lieutenant yesibini. Ukuhlala kwakhe kunye ne-regiment yayifutshane njengoko ngokukhawuleza wahanjiswa kwiiNkqutyana zesiBini ezandula zenziwe ngo-1849. Ukukhonza emngceleni, uBuford wabamba iqela kwimikhankaso emininzi ngokumelene namaNdiya kwaye wamiselwa i-quartermaster ye-regimental ngo-1855. Ngonyaka olandelayo wazihlukanisa kwi-Battle of Ash Hollow malunga neSioux.
Emva kokunceda kwimigudu yokugcina uxolo ngexesha le-"Bleeding Kansas" inzima, iBuford yathatha inxaxheba kwiMormon Expedition phantsi koColonel Albert S. Johnston .
Kuthunyelwe e-Fort Crittenden, UT ngo-1859, eBuford, ngoku umthetheli, wafunda imisebenzi ye-theorists yempi, njengoJohn Watts de Peyster, owomeleza ukuba athathe indawo emiselweyo yemfazwe kunye nomgca wokukhwela. Kwakhona waba ngumgaqo wokukholelwa ukuba abagijayo bafanele balwe ne-infantry mobile kunokuba bahlawule ekulweni.
UBuford wayeseseFort Crittenden ngo-1861 xa i-Pony Express yazisa ilizwi lokuhlaselwa kwe-Fort Sumter .
UJohn Buford - Imfazwe Yemfazwe:
Ngekuqala kweMfazwe Yomphakathi , iBuford yadibana neRhuluneli yaseKentucky malunga nokuthatha ikhomishini yokulwa noMzantsi. Nangona ephuma kwintsapho ephethe isigqila, uBuyford wayekholelwa ukuba umsebenzi wakhe wawuse-United States kwaye wayenqaba. Ehamba empuma kunye ne-regiment yakhe, wafika eWashington, DC waza wamiselwa njengomncedisi-jongene nomphathi jikelele kunye nenqanaba elikhulu ngoNovemba 1861. UBuford wahlala kule ndawo yangemva kwamanzi kwaze kwaba yilapho uMninimandla Jikelele uJohn Pope , umhlobo ovela kumkhosi wamandulo, wamhlangula ngoJuni 1862 .
Ukukhuthazwa ku-brigadier jikelele, uBuford wanikwa umyalelo we-II Corps 'I-Horse Cavalry Brigade e-Pope's Army yaseVirginia. NgalooAgasti, uBuford wayengomnye wabasebenzi abambalwa be-Union ukuba bahlule ngokwabo ngexesha leNkqutyana yesiBili iMassassas. Kwiiveki ezikhokelela empini, uBuford wanika uPapa ithuba lokufumana ingqiqo. Ngomhla ka-Agasti 30, njengokuba uMbutho weManyano wawa phantsi kweMibini Manassas, uBuford wahola amadoda akhe ekulweni oluxakekileyo kuLee Ford ukuthenga uPapa ixesha lokubuyela ekhaya. Umntu ekukhokela phambili umrhumo, waxhatshazwa emadolweni ngeqhekeza esetyenzisiweyo.
Nangona bebuhlungu, kwakungeyona yingozi enkulu.
Ngethuba wayesebuya, uBuford wabizwa ngokuba yiNtloko yeehishini zoMkhosi weMeja Jikelele uGeorge McClellan Army of Potomac. Kwimeko enkulu yokulawula, wayekulo mkhosi kwi- Battle of Antietam ngoSeptemba 1862. Wahlala kwisikhundla sakhe nguMongameli Jikelele u-Ambrose Burnside wayekho kwi- Battle of Fredericksburg ngoDisemba 13. Emva kokutshatyalaliswa, uBurnside wakhululwa kunye noMphathi Jikelele uJoseph Hooker wathatha umyalelo womkhosi. Ukubuyela eBuyford ukuya ensimini, uHooker wamnika umyalelo we-Reserve Brigade, iSahlulo se-1, iCaralry Corps.
UBuyford wabona kuqala isenzo kumyalelo wakhe omtsha ngexesha leCampellorsville Campaign njengenxalenye yeMajethi uGeorge uGeorge Stoneman ekuhlaseleni kwintsimi yaseCompederate. Nangona uhlaselo lwahluleka ukufeza injongo zalo, iBuford yenza kakuhle.
Umlawuli wezandla, iBuford yayisoloko ifunyenwe kufuphi nemigca ephambili ikhuthaza amadoda akhe. Ekwaziwa njengomnye wabalawuli abakhulu abamahashe emkhosini, abahlobo bakhe babhekisela kuye ngokuthi "Abadala." Ngokwehluleka kukaStoneman, u-Hooker wakhupha umlawuli wamabhashe. Ngethuba wayecinga ukuba uBuford onokuthenjelwa, othulekileyo kwisithuba, esikhundleni sakhe wakhetha i-Flashier Major General Alfred Pleasonton .
Emva koko uHooker wathi wayecinga ukuba wenza iphutha ekujongeni iBuyford. Njengengxenye yokulungiswa kwakhona kweeCavalry Corps, uBuford wanikwa umyalelo weCandelo le-1. Kule nxaxheba, wayala iphiko elifanelekileyo lokuhlaselwa kukaPleasanton kwiJeor General JEB Stuart 's Confederate ngehishini laseBrandy ngoJuni 9, 1863. Ebudeni bemihla, amadoda aseBuford aphumelela ukubuyisela intshaba phambi kokuba uPleasanton alele rhoxiswa. Kwiiveki elandelayo, isahlulo saseBuford sanikela ngolwazi olubalulekileyo malunga nokunyuswa kwama-Confederate ngasenyakatho kwaye ngokuphindaphindiweyo baxabana nabamahhashi ahlangeneyo.
John Buford - Gettysburg kunye Emva:
Ukungena eGytytysburg, PA ngomhla wama-30 kaJuni, iBuyford yaqonda ukuba umhlaba ophezulu usezantsi kwidolophu yayiza kuba yintloko kuyo nayiphi na imfazwe elwa kulendawo. Ukwazi ukuba naluphi na ulwaphulo olubandakanya isahlulo sakhe luya kuthatha isenzo sokulibaziseka, waqhawula kwaye wathumela abadlali bakhe emagqabini aphantsi nantla-ntshona-dolophu yedolophu ngenjongo yokuthenga ixesha lokuba umkhosi uphume kwaye uhlale kwiindawo eziphakamileyo. Wahlaselwa ngentsasa elandelayo yi-Confederate yamandla, amadoda akhe angama-awa alwa neyure neyure ephethe into eyenza uMagoli Jikelele uJohn Reynolds 'I-Corps ukuba afike kwintsimi.
Njengoko iintsapho zithatha imfazwe, amadoda aseBuford azivala iindonga zawo. NgoJulayi 2, iqela likaBuford lajikeleza inxalenye yezantsi yemfazwe ngaphambi kokuba ihoxiswe nguPleasanton. I-Eye yeBuford ijonge kakhulu indawo kunye nokuqwashisa nge-tactical ngo-Julayi 1 eqinisekiselwe iNyunyana isikhundla apho baya kuphumelela khona iMfazwe yase-Gettysburg baza bajika umkhosi wemfazwe. Ngeentsuku ezilandela ukunqoba kweManyano, amadoda aseBuford alandela umkhosi kaGeneral Robert E. Lee ngaseningizimu njengoko aye eVirginia.
John Buford - Iinyanga zokugqibela:
Nangona kuphela u-37, indlela kaBuford engaqondanga ngayo yomyalelo yayinzima emzimbeni wakhe kwaye phakathi no-1863 wahlupheka kakhulu kwi-rheumatism. Nangona wayehlala efuna uncedo oluphakamisa ihashe lakhe, wayehlala ehlala esitheleni yonke imini. UBuford waqhubeka nokukhokela ngokuthe ngqo kwiCandelo le-1 ngokuwa kunye neenkqubo ezingabandakanyiyo zeManyano kwiBristoe kunye neMay Run . Ngomhla kaNovemba 20, iBuford yaphoqeleka ukuba ishiye intsimi ngenxa yecala elibi kakhulu le-typhoid. Oku kwamnyanzela ukuba ahlawule isibonelelo esivela kuMaja Jikelele weWilliam William Rosecrans ukuba athathe i-Army yee-Cumberland.
Ukuya eWashington, iBuford yahlala ekhaya likaGeorge Stoneman. Ngenxa yokuba imeko yakhe yanda, umlawuli wakhe wangaphambili wamnxusa uMongameli uAbraham Lincoln ngokuphakanyiswa kokufa kwabantu kwi-general general. ULincoln wavuma kwaye uBuyford waziswa ngeeyure zokugqibela. Nge-2: 00 ngomhlaka-16 Disemba, uBuford wasweleka kwiingalo zomncedisi wakhe uCaptain Myles Keogh. Ukulandela inkonzo yesikhumbuzo eWashington ngoDisemba 20, umzimba kaBuford wathunyelwa eWest Point ukungcwaba.
Ukuthandwa ngabantu bakhe, amalungu esahlulo sakhe sangaphambili abe negalelo lokuba ne-obelisk enkulu eyakhelwe phezu kwengcwaba ngo-1865.
IGGG: John Buford
Imfazwe: uJohn Buford
Jikelele uJohn Buford
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: iMfazwe yaseGlobe Tavern
Imfazwe Yomthonyama yaseMelika: iMfazwe yeeFowuni ezinhlanu
Imfazwe YaseMerika: I-Knoxville Campaign
I-Battle of Yellow Javer Tavern - iMfazwe yombutho
Iifrimi zeNtetho zaseNtaliyane eziphezulu
Izakhiwo zeMichiza ziqala ngeNcwadi A
Indlela yokudibanisa "iBrûler" (ukushisa)
5 Imithetho Yobuncwane bokuBhala
Ngumthendeleko woMbumba ongabonakaliyo?
Yintoni endiyenzayo naMasters kwi-Business Administration?
I-8-Ibhola iMithetho kunye neSicwangciso
Ukubuyiselwa kwe-Canonical yeTale yeTroy
2005 Saab 9-3 I-Aero Test Drive
Iingqinisiso ezilishumi elinesine zePlani yeWilrow Wilson yoxolo
Iimpi zeNapoleonic: iMfazwe yase-Albuera
Caravaggio - Umboniso we-400th Anniversary Exhibition